Home Wararka Gudaha Daawo:- Muqaal Xasaasi ah oo deg deg ah! Fahad oo sheegay in...
Daawo:- Muqaal Xasaasi ah oo deg deg ah! Fahad oo sheegay in dilka Ikraan ay ka dambeeyeen Rooble, Mahad Salaad iyo Al-Cadaala?
Agaasimihii hore ee hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa markii ugu horreysay si faah faahsan uga hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo aheyd sarkaalad ka tirsan hay’adda NISA, balse la sheegay inay u gacan gashay Al-Shabaab, ayna dileen, taas oo abuurtay xiisad xoogan.
Previous articleGolaha Aqalka Sare oo meel mariyay hab-dhowraha Golaha Aqalka Sare iyo ku xigeenkiisa.
Next articleSHIRKA GOLAHA WADATASHIGA QARANKA OO MAANTA KA FURMAY Muqdisho
Pogba, Mbappe, Jorginho, Depay, Dybala, Dest & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee...
5 ka mid madaxda hay’adaha sirdoonka ugu awoodda badan iyo qaabka...